About Us – sajilo online
अर्डर कसरी गर्ने
सर्त तथा अवस्थाहरू
सजिलो अनलाईनको बारेमा
सजिलो अनलाईन एक यस्तो पृष्‍ठभुमी हो जहाँ बाट हर कसैले आफुलाई आवश्यक बिभिन्न सेवा तथा सुबिधा बिशेष छुट सहित उचित मुल्यमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । २०७५ साल असार १३ गते अधिकारिकता पाएको यस कम्पनी सँग सयौ संघ संस्था तथा हजारौ जनमानस प्रत्यक्ष रूपमा सहकार्य गरी लाभ उठाई रहनुभएकोछ । समयनुकुल सेवा सुबिधा थप गर्दै तपाईंहरूलाई सन्तुस्टी प्रदान गर्नु हाम्रो मुल ध्येय रहेकोछ ।
ईटहरी -६, सुनसरी बाट सुरू भएको यस कम्पनिले हाल झापा, मोरङ्, सुनसरी, संखुवासभा तथा जनकपुर लगायत जिल्लाहरूका बिभिन्न स्थानहरूमा सफलता पुर्वक आफ्ना सेवाहरू बिस्तार गरिसकेकोछ । चाडैनै देशब्यापी रूपमा आफ्ना सेवा सुबिधा बिस्तार गर्ने उदेस्य लिएर सजिलो अनलाईन सकृय रूपमा लागिपरेकोछ । तपाईं आम जनमानस तथा ब्यापार ब्याबसायीहरूको सदैभ साथ रहने अपेक्षा गर्दछौ । सबैले आ आफ्नो ठाउँ बाट सम्भवत साथ दिदै उपलब्ध सेवा सुबिधा उपभोग गर्नुका साथै सल्लाह सुझाव र प्रतिकृयाको भर्पुर अपेक्षा राख्दछौ ।।
झापा, मोरङ्, सुनसरी, संखुवासभा, जनकपुर लगायतका जिल्लाहरूका प्रमुख सहर तथा बिभिन्न गाउहरूमा सजिलो अनलाईनले आफ्नो सेवाहरू प्रदान गरिरहेकोछ ।
तपाईंको आफ्नो ठाउमा शाखा बिस्तारका लागि संपर्क गर्नुहोला ।
सजिलो बिज मेम्बर
यती ब्याबसायीहरूले सजिलो बिज मेम्बरशिप लिई सक्नुभएकोछ ।
तपाईं पनि आजै बिज मेम्बरशिप लिएर हामीसँग हातेमालो गरी लाभ उठाउनुहोला ।।
यतिले सजिलो मेम्बरशिप लिसक्नु भएकोछ । कतै तपाईं छुटनु भएकोत छैन ? यदी छुट्नु भएकोछ भने आजै संपर्क गरी सजिलो मेम्बरशिप लिएर तमाम सेवा सुबिधा सहित सजिलो अनलाईन सँग हातेमालो गर्न तपाईंलाई स्वागत छ ।
बिभिन्न संघ संस्था तथा ब्यवसायहरू सजिलो अनलाईन सँग सहकार्य गरी आफ्ना सेवाहरू अझ सरल तथा सर्वशुलव ढंगबाट उपभोक्ता माझ पुर्याउन तत्पर रहेकाछन ।
ब्याबस्थापन को तर्फबाट
सि ई ओ
हिजो सम्म ‘बा’ गाउँका ठूला ठालूमा गनिन्थे । औरेजी बोल्न लेख्न जाँन्दथे, मास्टर पो हुन त । अझ ठुलो कुरो त उन्को हातमा रेडियो हमेसा रहिरह्न्थ्यो । समयले फड्को मार्यो । उन्को रेडियो अव नोकिया ब्राण्डको भयो । स्नेक गेम खुब खेल्दथे । वरीपरी केटाकेटी झुम्मन्थे । आज तिनै वरीपरी झुम्मिने केटाकेटिले ति मेरा बा लाई थोप्पो गन्दैनन । गनुन पनि किन, बा पबजी खेल्न जान्दैनन, यहाँ सम्म कि त्यो साम्सुङ्गको के के जाती सेटिङ तिनै भाराभूरा ले गर्दिनु पर्याछ । हेर त परिवर्तन । अ साची, ति मेरा सानाबा ! ” यस्मा हेर्देउ हेर्देउ के लेखी पठाएछन ।” भनेर बेला बेला चिट्ठी पत्र र के के जाती पढ्न लगाएको मैले त्यतिबेला झलझली सम्झिए, जतिबेला सनाबा साउदी बाट म्यासेन्जरमा गाउँको हाल खबर सोध्दै थिए । सुरूमा त म किन पत्याउ ? भाईहर्ले बा’को नाम को आई डि बनाए भन्ने लाग्यो । तर भिडियोकल गरेपछी छर्लङ !
बिकासका लागि न त यूगै परिवर्तन हुन पर्‍यो, न त भगवान बिष्णुले नयाँ अवतार लिनु पर्‍यो ! ए आम्मै ! मेरा जुगाका रेखी बस्न थाल्दा देखी २-४ पटक दारी फाल्दा सम्मको समयमात अच्चैकाली नै पो भैसक्यो त ! जे चाईने, अनलाईन मै पाईने, सन्त साधु देखी लिएर बर बधु सम्म अनी घर जग्गा देखी लिएर गूड्खा मधु सम्म आजकाल अनलाईन मै भेटिन्छन, दिनभर घुमेर नभेटिने सेवा तथा सामन अव छिनभरमै ।त्यसैले आउनुस्, हामीपनी समय सँगै अप्डेट हौ ।
यि सबै घटनाक्रम तथा परिवर्तन सिर्फ मेरो मात्र हैन, तपाईंहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ भन्ने मेरो ठम्याई छ । यदी मेरो धारणा सँग सहमत हुनुहुन्छ भने अवको बजारमा अनलाईनको आवश्यकता जती तपाईं महशुस गर्न सक्नुहुन्छ, शायद त्यती म शब्दमा बयान गर्न नसकुला । २०७२ साल तिर फेस्बूक बाट अन्लाईन सप सुरू गर्दा १०-११ बर्षका भाईलाई समान डेलिभरी गर्दाको त्यो पल र ति ६०+ उमेर का बा लाई सामन पुर्याउदा दिनुभएको प्रतिकृयाले मलाई हमेसा उर्जावन बनाउछ ।
समय सँगै चल्नुपर्छ, बिकास आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ । आज जुन प्राबिधिको हामी प्रयोग गर्दैछौ, कुनै बेला सिर्फ केही बेबकुफ बाहेक अन्यले यसलाई असम्भब नै देखेका थिए भन्ने मलाई भान तव हुन्छ जव देश दुनियाँले उपभोग गरिरहेको प्राबिधिको हामी पनि प्रयोग गरौ अघी बढौ भन्ने प्रस्तवना लिएर जादा सोही बिल्ला भिरेर फर्कनु पर्दछ । म कुनै नयाँ कार्य गर्न गईरहेको छैन । उही दैनिक जीवनमा भैपरी आउने कार्यलाई कसरी सहज गराउने भन्ने बाटो मात्र खोजिरहेकोछु ।
२०६३ को एस एल सि पस्चात लाखौंको भिडमा एकल संघर्स गर्दै आएको “म” आफ्ना समस्त बुद्दी बिबेक र अनुभबलाई एकत्र गरी तमाम जनमानसको सल्लाह सुझाब र हौसलालाई आत्मासाथ गर्दै यस सजिलो अनलाईन प्रा ली लाई स्थापित गराउन लागिपरेकोछु । विश्वाश छ, यो यात्रामा सँगै हातेमालो गर्नुहुनेछ ।
Copyright sajilO Online Pvt. Ltd